अर्थतन्त्रको शुभारम्भ – Arthatantra.com
आर्थिक विकास चलायमान नभई सम्पूर्ण क्षेत्रको चौतर्फी विकास सम्भव छैन । मुलुक आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बन्न अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्नु आवश्यक छ । निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्न सके विदेशी मुद्राको आर्जनमा बढोत्तरी र राज्यको बचतमा समेत वृद्वि गर्न सकिन्छ । राज्यको बचत वृद्वि हुनु भनेको लगानीमा अवसरको सिर्जना हुनु पनि हो । फलस्वरुप बिद्युत्, बाटो, स्कुल, स्वास्थ्य, पर्यटन, प्रबिधि लगायत आवश्यकीय क्षेत्रमा लगानी बढ्नपुग्छ । मुलुकको चौतर्फि विकाससँगै राज्य सबल, समृद्ध र शक्तिवान् बन्नपुग्छ ।
भर्खरै मुलुक द्वन्द्वबाट शान्तीमा रुपान्तरित हुँदै नयाँ संबिधान प्राप्त गरी विकासको सिंढी चढ्ने जमर्को गर्दै छ । यही बेला देखिएका विघ्न बाधाहरु पन्छाउँदै आर्थिक विकासमा लम्कन खोज्दै छ । यतिबेला चौबाटोमा उभिएर हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो छ ? कुन दिशा तर्फ गईरहेको छ ? देशमा यस अघि देखिएका विद्यमान समस्या के हुन् ? र त्यसको पहिचान कसरी गर्न सकिन्छ ? यी र यस्ता सवालमा सरकारी एवं नीजि क्षेत्रलाई घचघच्याउनु जरुरी छ ।
जबसम्म आर्थिक हिसाबले मुलुक सबल, सक्षम र समुन्नत हुन सक्दैन, तबसम्म हाम्रा समस्या र चुनौतिहरु जहाँको त्यहि नै रहन्छन् । राजनीतिले एक विन्दुमा नयाँ मोड लिन खोजेको बर्तमान अवस्थामा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन, मुलुकलाई समुन्नत राष्ट्रको सूचिमा पु¥याउन, अर्थतन्त्र भित्र देखिएका विकृति र विसंगतिलाई चिर्न र अर्थतन्त्रलाई सबल दिशा तर्फ उन्मुख गराउन सञ्चार माध्यमको अहम् भूमिका हुन्छ । देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र लगायतका राजनीतिक परिवर्तनमा सञ्चारमाध्यमले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । जनतालाई सुसूचित गराउन र जागरुक गराउन सञ्चारमाध्यमले जुन अभियान चलायो त्यो पनि एक विन्दुमा पुगे पछि अन्यत्रै मोडिनु आवश्यक छ ।
हिजोका जंगली युग देखी हालसम्म विभिन्न दुःख, कष्ट व्यहोर्दै मुलुक सूचना र सञ्चारमा निकै फड्को मार्न पुगेको छ । यतिबेला प्रिन्ट मिडिया (मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक र दैनिक पत्रिकाहरु) ले जुन प्रकारको योगदान गरे र गरिरहेका छन्, ति माध्यम पनि अवका दिनमा नयाँ मोड लिन खोज्दै छन् । यतिबेला डेस्क्टप, ल्यापटप हुँदै नोट बुक र आइप्याडमा आइपुगेको छ । मानिसका हातहातमा स्मार्ट फोनहरुसंगै दु्रत गतिका इन्टरनेट साथमै पुगेको छ । यो दुनियाँ अनलाइनमा कुदिरहेको छ । प्रविधिको विकासले जुन प्रकारको गति लिएको छ मानिसको समृद्धि पनि उत्तिकै बढ्नु पर्छ ।
समयक्रम संगै अगाडी बढ्ने क्रममा समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दा विकास र समृद्धि अगाडी आउँछ । विकासको गति पछ्याउन आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिनु पर्छ । मानिसलाई सबल र सक्षम बनाउन सकारात्मक सोच विकास मुखी अवधारणाको खाँचो छ । यही अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै मुलुकको आर्थिक विकास र उन्नतिमा सहयात्रा गर्न काठमाडौँको लाजिम्पाटमा कार्यालय स्थापना गरेर डेभलपमेन्ट मिडिया प्रोमोशन प्रा.लि.ले अर्थतन्त्रडटकम अनलाइन न्युज पोर्टलको शुभारम्भ गरेको छ ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन मिडिया सर्बत्र उदाउँदै गर्दा प्रिन्ट मिडियाहरु एकाध बाहेक अन्योलमा छन यतिबेला । अवको युगलाई प्रतिनिधित्व गर्न अनलाइन सञ्चारमाध्यम जवर्जस्त उदाइरहेको छ । अनलाईनहरुको भिडमा थपिएको अर्थतन्त्रडटकम आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्न सफल हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ । खोजमुलक समाचार, विचार र विश्लेषण पस्कने उद्देश्य साथ भिन्न पहिचान साथ आर्थिक क्षेत्रलाई बिट बनाएर पाठक सामु उपस्थित भएका छौं । समुन्नत नेपाल निर्माणका निम्ति यस अनलाइनले मुख्यतः आर्थिक सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । अनलाइन दुनियामा नयाँ छौँ । भर्खर बामे सर्दै छौँ । पक्कै पनि यहाँहरुको तर्फबाट सहि सूचना, सकारात्मक टिप्पणी, विचारोत्तेजक लेख रचना र माया र सद्भाव पाउने अपेक्षा गरेका छौँ ।
प्रकाशित मिति २०७२/ १०/ ०३
quick link मा रोजगार जस्तो महत्वपुर्ण बिषयलाइ ठाउ दिन कन्जुस्याइ गर्नु भए जस्तो लाग्यो। यो जरुरी बिषयलाइ समेट्न नबिर्सनु होला ! सफलताको शुभकामना !
खेलकुद मन्त्री पुरूषोत्तम पौडेलद्वारा राजीनामा नेकपा एमालेबाट सरकारमा सहभागी भएका खेलकुद मन्त्री पुरूषोत्तम पौडेलले पदबाट राजीनामा […]
रूपैडिया नाकाबाट १० ट्यांकर डिजेल नेपाल भित्रीए रूपैडिया नाकाबाट १० ट्यांकर डिजेल नेपाल भित्रीएको छ। बिहिबार केही समय अघि रूपैडिया […]
गरीव तथा दलितका लागि घर बनाइदिन कार्टर नेपाल आउँदै काठमाडौं । गरीव तथा दलितका लागि घर निर्माण गरिदिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर […]
गौर भन्सारमा धर्ना बसेका मोर्चाका कार्यकर्तालाई भारतीयको खाना १४ असोज, गौर । गौर भन्सार नाकामा धर्ना बसेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र […]
राजदूत उपाध्याय भन्छन्- श्राद्ध सकियो, भोलि भारत फर्किन्छु १४ असोज, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच तनाव चुलिएका बेला भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार […]
बैंकको एटीएममा समेत नाकाबन्दीको असर ४ असोज, काठमाडौं । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तीय […]